जनता अझै ल्याप्चे मै छन, औपचारिकतामा पूर्ण साक्षरता घोषणा गरिदै – Parbat News
२९ पुस, पर्वत । जिल्ला शिक्षा कार्यालय पर्वतले २ बर्ष पहिले गैर सरकारी संस्थाहरु मार्फत निरक्षरलाई साक्षर गराउनका लागि सहजकर्ताहरु गाउँ गाउँमा खटाएको थियो । प्रारम्भिक तथ्यांकका आधारमा निरक्षर देखिएकाहरुलाई साक्षरता कक्षा मार्फत साक्षर गराउने त्यो अभियान निकै आलोचित बन्यो । गैर सरकारी संस्थाहरुले मोटो रकम नपाएका कारण त्यसको अनुगमन र असल ब्यवस्थापन गरेनन ।
उता, शिक्षा कार्यालयले भने सहभागीहरुका लागि खरिद गर्ने कपी र पेन्सिलको कमिसनमा आँखा लगायो । फितलो ब्यवस्थापनका कारण अधिकांश ठाउँका साक्षरता कक्षाहरु सञ्चालनमा आएनन । सञ्चालनका आएका पनि निस्प्रभावी बने । कक्षा सञ्चालनको अनुगमनका लागि सम्बन्धित साविकका गाविसहरुमा विद्यालयहरुका प्रअलाई जिम्मेवारी तोकिएको थियो ।
सञ्चालन नै नभएका कक्षाहरुको समेत अनुगमनको भत्ता खाएका प्रअहरुको अनुगमन पनि प्रभावकारी थिएन । मासिक ३ हजारका दरले २ महिनाको ६ हजार बुझको सहजकर्ताहरुले जिल्ला शिक्षा कार्यालयले उपलब्ध गराएको निरक्षरहरुको नामावलीका ब्यक्तिहरु नै गाउँमा नभेटिएको गुनासा समेत गरेका थिए । पहिलो चरणको साक्षरता कक्षा सञ्चालनका लागि जिल्लामा आएको २ करोड रुपैंयाको उल्लेखनीय प्रगति देखिदैन । त्यस बाहेक साक्षर जिल्ला घोषणाका लागि अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत भित्रिएको मोटो रकमको खोजी गर्ने हो भने त्यो रकम ठूलो देखिन्छ ।
निरक्षरहरु गाउँमा अझै पनि छन । सामान्य आफ्नो नाउँ समेत पढ्न र लेख्न नसक्नेको संख्या जिल्लामा ठूलो भएपनि सरकारकाले ‘तार्जेट’ पुरा गराउन यति बेला शिक्षा कार्यालय र स्थानीय तहहरु लागीपरेका छन । शुक्रबार मात्रै पर्वतका ५ वटा वडालाई पूर्ण साक्षर घोषणा गरेर सरकारले साक्षरता कार्यक्रमलाई औपचारिकतामा मात्रै सिमित गरेको छ ।
पैँयु गाँउपालिकाको वडा नं.२ त्रिवेणी वडा नं.४ र ५ हुवास,वडा नं. ६ सरौखोला र फलेवास नगरपालिकाको वडा नं. १० कुर्घा लाई शुक्रबार पूर्ण साक्षर वडा घोषणा गरिएको हो । जिल्लाको कुर्घा ,हुवास ४ र ५ ,त्रिवेणी र सरौखोला पूर्ण साक्षरता घोषणा गरिएको छ । योसंगै जिल्लामा ५६ वटा वडालाई सरकारले पूर्ण साक्षरता वडा घोषणा गरीसकेको छ ।
वडा भित्र रहेका १५ देखि ६० उमेर समुहका ९५ प्रतिशत भन्दा बढी नागरिक अक्षर चिन्न, लेख्न र पढ्न सक्ने भएपछि वडालाई पूर्ण साक्षर वडा घोषण गरिने सरकारी मापढण्ड अनुसार वडालाई पूर्ण साक्षर घोषणा गरिएपनि वडाहरुमा अझै धेरै निरक्षर संख्या छ । घोषणामा मात्रै सिमित गर्ने सरकारका यी कार्यक्रमहरु जनता माझ लोकप्रिय बन्न सकेका छैनन । सुचक पुरा गराउनका लागि लक्षित यी कार्यक्रमहरु साँचो अर्थमा कार्यान्वयन हुनु जरुरी छ ।